Wasaaradda warfaafinta,Dhaqanka iyo Dalxiiska oo ka dalbatay hay,adaha Amniga in ay ku wargaliyaan wasaaradda talaabo kasta oo laxiriirta Suxufiga iyo Saxaafadda. – Radio Muqdisho
Warsaxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda ayuu Md Maxed Cabdi Xayir Maareeye waxaa uu kaga dalbaday hay’adaha Amaanka dalka in ay xarigga wariye ama warbaahin ay la socodsiiyaan Wasaaradda Warfaafinta,Dhaqanka iyo Dalxiiska maadaama ay mas’uul ka tahay warbaahinta dalka, wax kasta oo arimahooda laxiriirana ay waajib tahay in ay ka war hayso Wasaaradu.
Wasiir Maareeye waxaa uu ka codsaday Hay’adaha amniga in Saxafiyiinta xiran hadda lasiidaayo, ama si deg deg ah Maxkamad loo hor geeyo si waafaqsan Dastuurka Dalka, iyo sharciga warbaahinta dalka ee uu ansixiyay golaha wasiirada.
Hadalka Wasiirka ayaa imaanaya xilli uu xiranyahay wariye Cabdifitaax Kalgacal oo ka tirsan Idaacadda Goobjoog kaas oo aanay wasaaradu waxba kala socon sababta loo xiray.
Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Gaashaandhigga oo gaaray degmada Caabudwaaq "Sawirro"